Toluna Bido: Onye Amụma Ndị Ahịa Na-ere Ndụ Na Obodo Ọha Obodo | Martech Zone
Toluna Bido: Onye nwere ọgụgụ isi na ndị ahịa oge niile na nzukọ mba ụwa
Tọzdee, Ọktoba 29, 2020 Tọzdee, Ọktoba 29, 2020 Douglas Karr
Toluna Start bu agile, end-to-end, ezigbo oge onye ahia ihe omuma. Ngwaahịa ahụ na-enye nghọta ndị ahịa, nyocha ahịa, ma na-enye ndị ahịa ikike ịme ozugbo na nyocha oge na ezigbo. N'adịghị ka nyiwe nyocha nyocha ọdịnala ọdịnala, Toluna na-agwakọta ma teknụzụ dị mkpa na ịnweta obodo zuru ụwa ọnụ iji nye ozi ịchọrọ.
Ma ọ bụ agile ọhụrụ ngwaahịa mmepe ma ọ bụ ule brand na nkwukọrịta ozi, Toluna nwere a n'ji ọgụgụ isi n'elu ikpo okwu na-enyere gị ahịa nnyocha nke na-eji ọkụ:
Ahịa ọgụgụ isi - Nweta otu isi ihe niile ị maara. Toluna Start bu ngwucha ngwucha nzuko komputa na iji otu nnabata. Nweta ọtụtụ ihe ọmụma akpaghị aka na-ekpuchi nyocha nyocha, ndị na-aza ajụjụ nyocha, yana ịkọwapụta dashboard gụnyere nghọta na aro.
Nchịkọta na Dashboard - Nweta data gị ozugbo. Site na akụkọ oge na-aza ajụjụ na mmeghachi omume na nyocha dị elu. Tụọ arụmọrụ megide KPI na nkeji yana dashboard ezubere iji nye nghọta nghọta. Data ibu ibu, mepụta ndị bi na mbara ala, nyocha ma duzie ogo niile dị mkpa. Dọrọ na dobe slide PowerPoint, okwu igwe ojii verbatims, wuo tebụl, ma megharịa ọkọlọtọ ka ọ dị mkpa.
Oha obodo na mkparita uka banyere ndu - Mee ngwa ngwa soro ndị kachasị mkpa maka akara gị. Gwuo ma kpughee mmetụta uche na mkpali ndị na-akpali omume ndị ahịa. Zụlite obodo ndị na - emepụta ngwa ngwa ma na - etinye aka na ya — n'agbanyeghị ahịa ịchọrọ. Tọọ mkparịta ụka Live Live na nkeji nkeji ma soro ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya.
Agụụ Ahụhụ - Ghọta omume ndị ahịa n'ofe ekwentị na desktọọpụ, weebụsaịtị, na ngwa. Gụnyere ngwa ndị arụnyere, usoro ịgagharị, omume nchọgharị, omume ọchụchọ, na ịzụta ozi gafee ndị na-ere ahịa kasịnụ n'ụwa.
Akpaaka akpaghị aka - Nweta nnabata na ozugbo. Ọnụ ego, chọpụta ma enwere ike ịmalite ọrụ na nkeji. Usoro nyocha nke akpaghị aka nke Toluna na-enye ndị na-eme nchọpụta usoro ziri ezi na ndị na-emetụta anyị nke ndị na-aza ajụjụ nke ọma.
Obodo Global Panel - Pịa n'ime ike nke ihe karịrị nde mmadụ 30 gburugburu ụwa. Ndị otu anyị dị njikere, dị njikere, ma nwee ike ịnye nzaghachi ịchọrọ, niile na ezigbo oge iji mee ka mkpebi gị dị elu. Zube ndị ahịa n'ofe ahịa 70 + na-eji ihe karịrị profaịlụ 200 na omume ha.
Ọrụ Nyocha - Ndi okacha amara n’ime ulo Toluna tinyere ulo oru nwanne ha nwanyi Harris mmekọrịta nwere ezigbo nghọta doro anya nke nwere ike ime ka amaghi ama. Ejikọtara ha na ọrụ anyị na-arụ ọrụ akpaghị aka. Ma ọ bụ ha nwere ike ịmepụta usoro mmemme na ọkachamara nyocha. Ọrụ ọ bụla na-egbo mkpa gị.
Hazie Toluna Start Demo
Tags: akpaghị aka nleleomume n'ji ahianghọta ndị ahịandụ mkparịta ụkanchọpụta ahịaọrụ nyochatoluna
Ọ bụrụ na ị maghị ihe WordPress Child Theme bụ…